Maaraynta nolasha e shimbrka tukaha aadamuhu kaga dayan karo | Biyoguurenews.com
Home Wararka Maaraynta nolasha e shimbrka tukaha aadamuhu kaga dayan karo
Maaraynta nolasha e shimbrka tukaha aadamuhu kaga dayan karo
Tukaha oo ah shimbir lagu tilmaamo inuu aad u caqli badan yahay ayaa laga baran karaa waxyaabo badan oo ay aqoonyahannada u kuurgalay ku sheegeen kuwo ku saabsan dhinaca horumarka.
Shimbirkan loo yaqaan Tuke Wuxuu Caan Ku yahay Qodabadan
1 Feejignaan , oo Waxa la Yidhi Tukow Goormaad Wax dareentaa Wuxuu Ku jawaabay marka Labo Qof Is Eegaan
2 Tukuhu Wuu Yaqan Cadwgiisa o Qofka Wax u gaysta wuu u calaamadsanyahay
3 Goobta lagu diloo mid ka mid ah wuu isku qaylo dhaan dirtaa
David Hughes, oo ah nin Shimbiraha xannaaneeya ayaa yiri: “Si guud marka loo eego shimbiraha oo dhan, tukaha waa xayawaan aad iyo aad u caqli badan oo waxyaabo badan laga faa’iideysan karo”.
Afar Cashir oo Tukaha laga barto, horumarna lagu gaari karo
Horay ayaa loo soo tabiyay sheekooyin ku saabsan mucjisooyinka u gaarka ah Shimbirkan, balse tani waa mid faa’iido weyn u leh bani’aadanka.
Beki Hooper, waa haweeney aqoonyahanad ah oo sameysa cilmi baarista ku saabsan xayawaanka, waxayna aaminsan tahay in Tukaha uu awood u leeyahay xalinta dhibaatooyinka.
“Iyagoo halabuurnimo adeegsanaya ayey xallin karaan xujo walba, waayo waxay isu geynayaan xirfado ay barteen oo ay dib usoo xasuustaan, waxayna caqabaddii u xallinayaan hab ay si gaar ah usoo hindiseen”.
Sidoo kale, Mr Hughes qudhiisu wuxuu sheegayaa in tukeyaasha ku jira shimbiraha uu xannaaneeyo uu waxyaabo badan ka bartay.
Wuxuu tusaale ahaan usoo qaatay mid dhadig ah oo lagu magacaabo Betty.
“Wax ayey arkeysaa , kadib madaxa ayey ruxeysaa isla markiina waxaad arkeysaa sida ay uga shaqeyneyso helitaanka waxaas”.
Cashirkan waxay dadku ka baran karaan in marka ay xal u raadinayaan dhibaatooyinka ay u eegaan hab halabuurnimo ah oo khaas ah.
Qodobkan wuxuu ku sabasan yahay in tukaha uu leeyahay dabeecad uu ku wajaho caqabadaha lama huraanka ah, uuna uga gudbo nidaam qorsheysan.
James Dyer, wuxuu khabiir ku yahay xirfadaha lagu badbaadiyo nafta, wuxuuna isagoo arrintan sharraxaya yiri: “Waxaa jirta xigmad military oo dhaheysa ;’caqabadda marka hore fahan, ka dib la qabso, ugu dambeynna ka gudub’. Taasi runtii waa dhanka wanaagsan ee laga eegi karo wax walba”.
Shimbirka Tukaha wuxuu si caqliyeysan uga gudbaa caqabadaha soo wajaha, taasoo dadkuna ay ka faa’iidi karaan inay dhibaatada la qabsadaan, oo la tacaalaan halkii ay ku niyad jabi lahaayeen.
Beki Hooper oo mar kale ka hadleysay sida uu xayawaankan u noolyahay ayaa sheegtay in xitaa uu sameysto qalab uu raashinka ku raadsado.
“Waxay sameystaan qalab ay dadaal farabadan ku bixiyaan, kaasoo ay hal dhinac ka dhigaan mid adag dhinaca kalena ka jilicsan oo dhankii la doono loo wareejin karo, ka dibna waxay u adeegsadaan inay dhulka ku qodaan ugana soo baxsadaan cuntadooda”, ayey tiri Marwo Hooper.
Bani’aadanka waxaa muhiim u ah inay lacagta keydsadaan, laakiin arrintaas dad badan waxaa ka heysata caqabad.
Hase yeeshee, Tukaha ayey aad ugu sahlan tahay inuu raashinkiisa keydsado, taasina uu ka dhigtay dabeecad.
Aqoonyahannadu waxay sheegayaan in dadku ay shimbirkan ka baran karaan arrintaas, si ay dhinaca dhaqaalaha uga dhismaan.
Haddii aad wax keydinta ka dhigto qeyb ka mid ah dabeecaddaada joogtada ah waxay kuu horseedeysaa horumar baaxad leh.
Rob Gardner, waa aqoonyahan wax ka dhiga cilmiga maaliyadda.
“Tukuhu wuxuu run ahaantii fahansan yahay faa’iidada ku jirta in keyd la sameysto, iyo waliba in keydkaaga uu dulsaar yeesho, sidaas awgeed marka ay raashin keydsadaan, oo ay ku qarsadaan cawska hoostiisa, waxay ogyihiin inay muddo ka dib cuntadaas u imaanayaan cayayaan, markaasna Tukuhu wuxuu helayaa raashin kale oo dheeraad ah, maadaama cayayaanka qudhiisa uu cuntadiisa ka mid yahay”, ayuu yiri Mr Gardner.
Waxay cilmi baareyaashu sheegeen in muddo dheer la aaminsanaa in sugitaanka waxa wanaagsan ee soo daaha uu dhif iyo naadir ku yahay bani’aadanka iyo xayawaannada, laakiin hadda la ogaaday in Tukaha uu si joogto ah ugu xisaabtamo faa’iidada soo daahda.
Waxay tukayaashu diidaan inay qaataan waxyaabo ay isla markaas heli karaa, iyagoo doonaya inay muddo ka dib helaan wixii oo intii hore ka badan kana tayo fiican, gaar ahaan cuntada.
Mararka qaar haddii ay arkaan wax ay hal waqti cuni karaan, waxay ku aasaan dhulka, iyagoo markii ay muddo sugaan dib ugu laabta cuntadii oo dixiri badan ku dhashay, sidaasna ku badatay.
Haddaba cashiradan ayaa loo arkaa kuwo wax ka tari kara dhinaca horumarka bani’aadanka, markii dhanka kale loo rogo, iyadoo tusaale uun laga qaadanayo, waxaana jira sheekooyin kale oo ku saabsan shimbirka Tukaha.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland Oo U Dhoofay Dalka Sucuudiga Soona Gudan Doona Waajibaada Xajka
Next articleBaarlamanka Kenya o Meel Adag iska taagay Muranka bada e ka Dhexeeyay Somaliya iyo Qodabo Kulul o ay u Jeediyeen Xukuumada Uhuru Kenyata